'सही कार्यकर्ताले असल पार्टी निर्माण गर्दछन्, सही कम्युनिष्ट पार्टीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछ' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘सही कार्यकर्ताले असल पार्टी निर्माण गर्दछन्, सही कम्युनिष्ट पार्टीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछ’
बुधबार, कार्तिक १०, २०७३
परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण
वर्गीय समाजमा शोषक र शोषित गरी दुईवटा प्रमुख परस्पर विरोधी वर्गहरु हुन्छन् भने अन्य सहायक वर्गहरु ती प्रमुख वर्गको वरिपरि गोलबन्द भएका हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीले निश्चित वर्गका हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । श्रमजीवी वर्गले कम्युनिष्ट पार्टी बनाउँछ भने पुँजीपति वर्गले आफ्नो हित गर्ने पुँजीवादी पार्टी बनाउँछ । अहिलेको संसारको यथार्थ यही हो । सैद्धान्तिक÷दार्शनिक हिसाबले चर्चा गर्दा एउटा देशमा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी र एउटा पुँजीवादी पार्टी मात्रै हुनु पर्ने हो । श्रमजीवी वर्गको विभिन्न स्तर, पेशा–व्यवशायमा रहेका जनताको आधारभूत हित कम्युनिष्ट पार्टीसंग नै मिल्छ । यसैले तिनीहरु एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको वरिपरि गोलबन्द हुनु पर्ने हो । यसैगरी विभिन्न क्षेत्र, पेशा र ब्यवशायका पुँजीपतिहरुको हित पनि आपसमा मिल्ने हुँदा उनीहरुको पनि एउटै प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी हुनु पर्ने हो तर ब्यवहारमा यस्तो देखिन्न । एउटै देशमा एकभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने गरेका छन् भने पुँजीपति वर्गका पनि विभिन्न पार्टीहरु बनेका र चलेका छन् ।
यस्तो किन हुन्छ त भन्ने प्रश्न धेरै गंभीर र महत्वपूर्ण छ । एउटै देशमा एकभन्दा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी बन्नु र धेरै पुँजीवादी पार्टी बन्नुका आधार र कारण भने फरकफरक रहने गरेका छन् ।
एउटा देशमा एकभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुमा मूलतः तात्कालिक कार्यनीतिका बारेमा हुने गरेको मतभेद जिम्मेवार रहने गरेको छ । सही वा गलत जे सुकै भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन मूलतः विचार वा सिद्धान्तको आधारमा वा वस्तुगत यथार्थलाई बुझ्ने र तदअनुसार निश्कर्ष निकाल्ने मामिलामा हुने गरेको भिन्नताका कारणले हुने गरेको देखिन्छ । श्रमिक–सर्वहारापक्षीय विचार, कार्यशैली र आचरणमा हुने पतनले पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन ल्याउने गरेको छ । कार्यशैली र आचरणको कुरा पनि मूलतः वैचारिक विषय भएको हुँदा विचारको सुदृढीकरण वा स्खलन दुबै कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारण बन्ने गरेका छन् । विचारको सुदृढीकरण गर्दा अवसरवादी तत्व पार्टी छोडेर जान सक्छ र सानोतिनो विभाजन हुनसक्छ ।
विभिन्न पुँजीवादी घराना र वित्तीय पुँजीका केन्द्रहरुमा नाफाको कब्जाका लागि हुने प्रतिस्पर्धाको छाप पुँजीवादी पार्टीमा पर्दछ । विभिन्न कम्पनीहरुका बीचमा आपसमा गलाकाट प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आÇनो वित्तीय स्वार्थको रक्षाका लागि निजी कम्पनी र तिनका गुटहरुले राजनीतिक छहारी खोज्दछन् । बजारमा हुने नाफाको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक तहमा व्यक्त हुन्छ । विभिन्न वित्तीय स्वार्थकेन्द्रहरुको आपसी टकराव विभिन्न पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीहरुका माध्यमबाट व्यक्त हुन्छ । यसैले एउटै देशमा पुँजीपति वर्गका पनि एकभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु हुन्छन् ।
विचार–सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिनु, निहित स्वार्थका कारणले विभिन्न गुटहरुको जन्म हुनु र त्यही कारणले नेतृत्वतहका विभिन्न व्यक्तिहरुमा आपसी टकराव हुने परिस्थिति भने कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्ट दुबै पार्टीहरुमा देखा पर्ने गरेको गरेको छ । व्यक्तित्वको टकराव बढ्दैजाँदा गुटहरुको समूह एउटै पार्टीमा अटाउन नसक्ने स्थिति तयार हुन्छ । फलतः पार्टीहरु विभाजित हुन्छन् । यसरी हुने विभाजनले पनि एउटा देशमा उही वर्गका एकभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु हुने गरेका छन् ।
कुनै पनि देशको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थिति अनुसार पार्टीहरुको निर्माण, विकास र सञ्चालन हुने गर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टी होस् वा गैर कम्युनिष्ट पार्टी, मूलतः सम्बन्धित देशको अर्थ–राजनीतिक परिस्थिति अनुसार नै निर्मित र विकसित हुन्छन् तर तिनीहरुमा सांस्कृतिक पक्षले पनि गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा त सम्बन्धित देशको सांस्कृतिक पक्षले पार्टी निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २०६२÷०६३मा सञ्चालित महान जनआन्दोलनले देशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । यो राजनीतिक पारिवर्तनको अगुवाई मूलतः नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबाट भएको हो । नेपाली कांग्रेसलाई यस परिवर्तनकारी अभियानमा संलग्न गराउन सक्नु नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिको सफलता हो भनेर स्विकार्न सक्नु पर्दछ । आन्दोलनमा उठेको जनदबाबका कारणले नेपाली कांग्रेस आÇना परंपरागत मान्यताहरु त्याग्न बाध्य भएको छ । देशको अर्थ–राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तित भएको छ । परिवर्तित परिस्थितिले पार्टी निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, विगतका अनुभवहरु के–कस्ता छन्, अबको परिस्थितिमा नेपालमा पार्टी निर्माणकासैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र सांगठनिक आधारहरु के–के हुन सक्छन्, समस्या के छन् र उपयुक्त समाधानहरु के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यो कार्यपत्र केन्द्रित रहेको छ ।
२.कार्यपत्र लेखनमा प्रयोग गरिएको विधि
कार्यपत्रको लेखनमा पूर्वकार्यको अध्ययनका लागि पुस्तकालयको प्रयोग गरिएको छ । पार्टी निर्माणको कार्यक्षेत्रमा प्राप्त अनुभवहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको हुँदा यसको लेखनमा अनुभव विधिको पनि प्रयोग भएको छ । तयार गरिएको प्रश्नावलीको आधारमा केही कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुसंग अन्तर्वार्ता समेत लिइएको हुँदा यसमा अन्तर्वार्ता विधिको पनि प्रयोग भएको छ । कार्यपत्रको लेखन अनुसन्धानमा आधारित विश्लेषणात्मक रहेको छ । प्रयुक्त सन्दर्भ सामाग्रीको उल्लेख गरी श्रोतहरुको आधिकारिकता पुष्टि गरिएको छ ।
३. कार्यपत्रको सीमा
यस कार्यपत्रको शीर्षक ‘‘परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण’ भए पनि यसमा कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणबारे छलफललाई केन्द्रित गरिएको छ । तुलनात्मक अध्ययनको प्रयोजनका लागि मात्रै गैर कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
४.परिवर्तित सन्दर्भको अर्थ
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको निर्माण विद्यमान समाजको अर्थराजनीतिक विश्लेषण गरेपछि शुरु हुन्छ । समाजको बारेमा एकपटक गरिएको विश्लेषण समाजको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन भएपछिको पार्टी निर्माणका लागि काम लाग्दैन । सम्बन्धित समाजको नयाँ अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा नयाँढंगले नै पार्टी निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालका सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विगत लामो समयदेखि नेपाली समाजको चरित्र अद्र्धसामन्ती रहेको विश्लेषण गर्दै आइरहेका थिए । नेपालमा २०६३को महान जनक्रान्तिले नेपाली सामन्तवादलाई आधारभूतरुपमै समाप्त गरिदियो र गणतन्त्रको घोषणाका लागि आधारभूमि तयार गरिदियो । २०६५ साल जेष्ठ १५ गते गरिएको गणतन्त्रको घोषणा २०६३को क्रान्तिले तयार गरिदिएको संवैधानिक घोषणा मात्रै थियो ।
गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक घोषणा गर्ने नेपालको पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधानको घोषणा भने गर्न सकेन, त्यसलाई असमयमै समाप्त गरियो । लामो समयसम्म अन्तरिम संविधान कायम हुनु र त्यसलाई विस्थापित गर्दै नयाँ संविधान घोषणामा ढिलाई हुनुले आम जनतामा जे–जस्तो भए पनि एक थान संविधान घोषित भैदिओस् र देशले आवश्यक स्थिरता पाओस् भन्ने चाहना रहेको थियो । नेपाली जनताको उत्कृट चाहना र जनस्तरबाट भएको चौतर्फी दबाबपछि नेपालको संविधान (२०७२) जारी गरियो । यस संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशा निर्देश गरेको छ । संविधानको यस प्रावधानले कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको सिर्जना गरेको छ । यसैगरी संघीय प्रदेशहरुको निर्माणका कारणले कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संगठनात्मक ढाँचामा पनि आवश्यक परिमार्जनको आवश्यकता आइलागेको छ । देशका प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आ¬–आÇना विधानमा प्रादेशिक स्तरको सांगठनिक ढाँचाको प्रस्ताव गरेका छन् र कसैकसैले प्रादेशिक स्तरका तदर्थ वा आयोजक कमिटी निर्माण पनि गरेका छन् । यी कुराहरु पनि परिवर्तित सन्दर्भहरु नै हुन् ।
आर्थिक आधारको रुपमा पहिले नै समाप्त भएको सामन्तवादलाई २०६३को क्रान्तिले राजनीतिक रुपमा समाप्त गरेको छ । देशमा पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । देशमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण अत्यन्त कमजोर रहेको छ तथा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादले कब्जा गरेको छ । देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गणतान्त्रिक क्रान्तिभन्दा अगाडिसम्म नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध सामन्तवाद तथा दलाल¬–नोकरशाही पुँजीवादसंग रहेको विश्लेषण अगाडि सार्ने गरेका थिए । सामन्तवाद समाप्त गरियो तर दलाल–नोकरशाही पुँजीवादलाई समाप्त गर्न बाँकी नै छ । नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसंग रहेको वर्तमान परिस्थिति नै परिवर्तित सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ हो ।
नेपाली जनताको देशीय अन्तर्विरोध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसंग रहेको, बाहिरी अन्तर्विरोध विश्व साम्राज्यवाद र त्यसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि विस्तारवादसंग रहेको, देश संघीय ढाँचामा गएको, नयाँ संविधान लागू हुन नदिन देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु विभिन्न आवरणमा सक्रिय रहेको, नेपालको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता भत्काउने दुश्प्रयास जारी रहेको, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्नका लागि हिमाल–पहाड–तराईका सबै जनता आमरुपमा एकजुट हुँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा कस्तो पार्टी आवश्यक हुन्छ र त्यसको निर्माणका प्रमुख विशेषताहरु के हुन् वा हुनु पर्दछ भन्ने विषय यस कार्यपत्रको केन्द्रीय पक्ष हो ।
५.परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण
कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्नु भनेको वर्गविभाजित समाजको अर्थराजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी त्यसको जगमा समाजवादी परिवर्तनका लागि आवश्यक तात्कालिक र दीर्घकालिक योजना वा पार्टी कार्यक्रम तय गर्नु र निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने सांगठनिक ढाँचा तथा कार्यपद्धति तथा कार्यशैली निर्माण गर्नु हो । पार्टी निर्माण भनेको तलदेखि माथिसम्मको सांगठनिक ढाँचा तय गर्नु मात्रै होइन । यसबारेमा नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको भनाइ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ¬ –
“पार्टीको निर्माण भन्नाले माथि केन्द्रदेखि तल लल्लो तहको कमिटीहरुको संगठन गर्नु नै हो भन्ने धारणा साथीहरुमा पाइन्छ । पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा यही नै सही धारणा होइन । यस्तो धारणा यान्त्रिक धारणा हो । यसमा सोच्नु पर्ने मुख्य कुरा हो– पार्टी कमिटीहरुको आपसी सम्बन्ध र संचार कसरी हुन्छ र पार्टीले कसरी शक्ति संचय गर्न सक्दछ ? यसको अभावमा पार्टीमा सजीवता आउन सक्दैन । सजिवता बिनाको पार्टीको संगठन त केवल अस्थिपन्जर मात्र हो । अतः पार्टी निर्माणको सम्बन्धमा सबभन्दा बढी ध्यान त्यसकुरामा पु¥याउनु पर्दछ जसले गर्दा पार्टीमा क्रियाशिलता बढ्दछ, आपसी सम्बन्ध र संचार स्थापित हुन्छ । यसका निम्ति हामी माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरुले मुख्यरुपले निम्नलिखित लेनिनका चार शिक्षामा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ –
(१) कुनै पनि देशको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो कार्यक्रम निश्चित गर्दा आÇनो देशको आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, संस्कृति, चाल चलन रीति–रिवाज, परम्परा आदि राष्ट्रिय विशेषतामा ध्यान दिनु अति आवश्यक छ । यस्तो अध्ययन बिना सही कार्यक्रमको निर्माण हुन सक्दैन ।
(२) क्रान्तिको निम्ति सर्वहारा वर्गको मित्रशक्तिको सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हो । प्रत्येक देशको कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहारा वर्गका मित्र तथा सहायक शक्ति चाहे ती दोधारे होउन, अस्थिर होउन, अविश्वसनीय तथा शर्तबन्दीमै भए ता पनि लिन सक्नु पर्दछ । यस्तो नीतिको अभावमा शक्तिशाली दुश्मनको सामाना गरी त्यसलाई नष्ट गर्न सक्ने छैनौं ।
(३) प्रत्येक देशको कम्युनिष्ट पार्टीले यो राम्रोसंग बुझ्नु पर्दछ कि क्रान्तिको निम्ति प्रचार–प्रसार मात्र पर्याप्त छैन । यसमा सबभन्दा मुख्य कुरा यो हो कि आम क्रान्तिकारी जनताको अंगलाई यस कुराको राम्रो बोध आफ्नै राजनीतिक संघर्षको अनुभवद्वारा हुनुपर्छ । अर्थात् पार्टीका राजनीतिक नीति तथा नारापट्टि जनताको विश्वास उनीहरुको राजनैतिक अनुभवद्वारा नै हुनु पर्दछ ।
(४)कुनै पनि देशको कम्युनिष्ट पार्टीले कुनै र कस्तै अवस्थामा पनि पार्टी संगठनको मुख्य सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको पालना गर्नुपर्दछ । यसको अवहेलना भएको खण्डमा पार्टी तहसनहस भएर जानेछ ।”
पार्टी निर्माण भनेको एकपटकको परिस्थितिको विश्लेषण गरी त्यस आधारमा तय गरिएको कार्यक्रमिक लक्ष्यका साथ गठन गरिएको संगठनलाई स्थिर वा यथास्थितिवादी तरिकाले परिचालित गर्नु होइन । पार्टी निर्माण भनेको यसको गठनका लागि सिद्धान्त–विचार र पार्टीको समग्र कार्यक्रम तय गर्नु, तिनमा निरन्तर परीक्षण गर्नु र प्राप्त नयाँ निश्कर्षका आधारमा सिद्धान्त, विचार र पार्टी कार्यक्रममा परिमार्जन गर्नु, विचारलाई बोक्नसक्ने सांगठनिक ढाँचा, त्यसको कार्यविधि, कार्यप्रणाली र कार्यकर्ताहरुको कार्यशैली तय गर्नु हो । यी सबै कुराहरुमा निरन्तर विकास गर्नु पनि पार्टी निर्माणको अभिन्न कार्य हो ।
पार्टीले आÇनो वैचारिक÷सैद्धान्तिक पक्षका साथै सामग्रिक योजनासहितको कार्यक्रम अगाडि सारेर मात्रै पुग्दैन । पार्टीमा निरन्तर नयाँ नयाँ कार्यकर्ताहरुको पंक्ति भर्ति भैरहनु पर्दछ । पार्टी निर्माण भनेको एकपटक बनेको पार्टीलाई सदाबहाररुपमा जीवन्त राख्नु हो । पार्टी जीवन्त हुन सकेन भने मर्छ । संसारको राजनीतिक इतिहासमा त्यस्ता थुप्रैपार्टीहरु देखा परे जसले एक समयमा युगान्तकारी काम गरे पनि पछिल्लो चरणमा आफूलाई जीवन्त राख्न सकेनन् र समाप्त भए । यसैले पार्टी निर्माण भनेको पार्टीलाई हरेक नयाँ परिस्थितिसंग जुध्न सक्ने र आÇनो मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने संगठित राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकसित गर्नु हो । कम्युनिष्ट पार्टीलाई जीवन्त राख्नका लागि निम्नलिखित बुँदाहरुमा हरदम ध्यान दिनु पर्दछ—
५.१. कम्युनिष्ट पार्टीमा केन्द्रको अवधारणा
सामान्यतया पार्टी केन्द्र भनेको केन्द्रीय समितिलाई बुझाउँछ । पुँजीवादी पार्टीहरुमा पार्टी केन्द्र पिरामिड आकारको माथिल्लो टुप्पोलाई भनिन्छ जहाँ तहगत रुपमा एकखाले नोकरशाहीतन्त्र बनेको हुन्छ । ‘माथिल्लोले तल्लोलाई आदेश दिने र तल्लो निकायले चुपचाप पालन गर्ने कार्य प्रणाली कायम गरिएको हुन्छ । यसको विपरित कम्युनिष्ट पार्टीमा केन्द्र ले नाभीको काम गर्नु पर्दछ । जसरी पृथ्वीको केन्द्रभागको गुरुत्वाकर्षणले सबै कुराहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्दछ, त्यसैगरी आÇना सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, कार्यशैली र नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सार्वजनिक आचरणजस्ता कुराहरुले आम श्रमजीवी जनतालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न सक्नुपर्दछ । पार्टी केन्द्रले आदेश दिएको भरमा तामेल गर्ने नोकरशाही संगठन बनाउने होइन । पार्टी केन्द्र माहुरीको घारजस्तो हुनु पर्दछ जसमा सबै माहुरीहरु स्वतन्त्रतापुर्वक स्वेच्छ्याले अटाउन सकुन् अनि पार्टीको नेतृत्व माहुरीको रानीजस्तो हुनुपर्दछ जसले आÇनो ज्ञान, कार्य–कौशल र कार्यशैलीबाट सबै कार्यकर्तापंक्ति र आम जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकोस् ।
५.२. पार्टी निर्माणको वैचारिक पक्ष
माक्र्सवादी विधिका आधारमा समाजको अर्थराजनीतिक विश्लेषण, क्रान्तिको नेतृत्वदायी वर्ग, सहायक वर्ग तथा क्रान्तिको शत्रू वा बाधक वर्ग वा शक्तिको ठोस पहिचान र त्यसका आधारमा आम श्रमजीवी वर्गको हित हुनेगरी समाज परिवर्तन वा क्रान्तिको आम र विशिष्ट कार्यक्रम निर्माण पार्टी निर्माणको वैचारिक पक्ष हो । विद्यमान समाज ब्यवस्थालाई परिवर्तन गरी समाजवाद निर्माण गर्दै साम्यवादी बाटोमा अगाडि बढ्नु कम्युनिष्ट पार्टीको आम रणनीति हो । यसका लागि तत्काल के गर्ने भन्ने विषय अर्थात् तात्कालिक कार्यनीति धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । तात्कालिक कार्यनीति स्पष्ट र सही भएन भने दीर्घकालिन रणनीति पनि अमूर्त र अस्पष्ट हुनजान्छ, लक्ष्यका बारेमा अनेक भ्रमहरु सिर्जना हुन थाल्छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टी समाज परिवर्तनको वर्गीय आन्दोलनका क्रममा जन्मिन्छ र निरन्तर विकसित हुँदै जान्छ । सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गले आÇनो जन्मकाल देखि नै पूँजीपति वर्गका विरुद्ध विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले संघर्ष गरेको छ । सन् १९१७मा लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न महान अक्टुवर समाजवादी क्रान्ति, त्यसको विश्वब्यापी प्रभाव र कम्युनिष्ट क्रान्तिको लहर, सोवियत संघ र पूर्वी युरोपमा करिब ७० वर्षको समाजवादी अभ्यासपछि भएको प्रतिगमन र त्यसपछि पुनः नयाँ समीक्षाका साथ उठ्दै गरेको समाजवादी अभियानका क्रममा श्रमजीवी वर्गले धेरै अनुभव प्राप्त गरेको छ । सोवियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरुमा राज्यद्वारा अति नियन्त्रित उत्पादन र वितरण प्रणालीको आधारमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको अभ्यास गरियो । त्यसका सकारात्मक पक्ष र कमी कमजोरीहरुको विश्लेषण गरी अबको समाजवादी अर्थतन्त्रको स्वरुप तय गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीको विचार निर्माणको प्रक्रिया हो ।
यसैगरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा समाजवादी खुला बजार अर्थतन्त्रलागू गरिरहेको छ । यसको प्रयोगबाट चीन संसारको प्रमुख आर्थिक शक्ति बनेको छ । चीनिया प्रयोगको पनि ठोस समीक्षा हुनु पर्दछ । खुला बजार अर्थतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा राज्य ब्यवस्थाको सञ्चालनका बीचमा के–कस्ता अन्तर्विरोध सिर्जना भैरहेका छन् र तिनलाई चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीले कसरी समाधान गर्दै गैरहेको छ भन्ने विषय पनि आजको समयमा कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको धेरै ठूलो विचारधारात्मक बहस र समीक्षाको पक्ष हो । आजको चीनिया समाजमा रहेका वर्गीय अन्तर्विरोधहरुको समाधान वर्तमान प्रयोगबाट हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा संसारभरीका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा बहस छ । वर्तमान चीनिया प्रयोगका बारेमा गरिने गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान र छलफलबाट समाजवादीब्यवस्था निर्माण र विकासको आधुनिक विचारधारा विकसित हुन सक्नेछ ।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको कम्युनिष्ट पार्टी एशियाकै जेठो मध्येमा पर्दछ तर पनि त्यहाँ किन कम्युनिष्ट पार्टीले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने प्रश्नले गंभीर विचारधारात्मक बहसको माग गर्दछ । त्यहाँ बहुदलीय संसदीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यासद्वारा राज्य सत्तामा हस्तक्षेप गरी श्रमिक जनताका पक्षमा गर्न सकिने सुधार गर्दैजाने कार्यनीति लिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुदेखि गुरिल्ला युद्दद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने सम्मका कार्यनीति लिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सक्रियता देखिन्छ ।
समाजवादी आन्दोलन र समाजवाद निर्माणमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा पनि आफ्नै खाले प्रयोगहरु भैरहेका छन् । ती देशहरुले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका पुँजीवादी–साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुको नीति–निर्देशनबाट आफ्नो अर्थतन्त्रहरुलाई मुक्त राख्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यी देशहरुमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक ब्यवस्था छ । यी देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो बनाउँदै राज्य सत्तामा आम श्रमजीवी जनताको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस क्रममा प्राप्त अनुभवहरुको पनि ठोस विश्लेषण हुनु पर्दछ र यसले कम्युनिष्ट पार्टीको विचार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबैखाले कार्यनीतिहरुको प्रयोग भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा आम जनता समावेस भएर गरिएका हरेक आन्दोलनले कम क्षतिमा बढी उपलब्धी दिएको इतिहास एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालमा सानो आकारका ससस्त्र विद्रोहहरु पटकपटक भए । विगतका हिंसात्मक विद्रोहहरुलाई सकारात्मक रहेको मान्दै नेकपा(माओवादी)ले विं.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेबाट औपचारिक रुपमा हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन ग¥यो । यसले ठूलै आकार लियो । शुरु गरिएको ११ वर्षभित्रैमा त्यो हिंसात्मक आन्दोलन २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्पन्न गरिएको तत्कालिन नेपाल सरकारसंगको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट टुंगियो । नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणले नेपालको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्पष्ट ग¥यो– आम जनता सामेल हुन नसक्ने तथा कार्यकर्ताहरुको जोडबल र बलिदानका आधारमा अगाडि बढाइने हिंसात्मक कम्युनिष्ट विद्रोहहरुले सत्ता कब्जा गर्न सक्दैनन् । कस्तो पार्टी बनाउने र आन्दोलनको कस्तो तरिका अपनाउने भन्ने विचार निरुपणका लागि माओवादी विद्रोहले ठूलै पाठ सिकाएर गएको छ ।
५.२.१. विज्ञानको समसामयिक प्रगति, माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट पार्टीको विचार निर्माण
कार्ल माक्र्सले सन् १८४७ मा ज्यालादारी श्रम र पुँजी लेखे । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेलल्सद्वारा कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र सन् १८४८मा लेखियो । कार्ल माक्र्सले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रहेका अन्तर्विरोधहरुको गहन विश्लेषण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको अपरिहार्यता बारे लेखिएको विशाल ग्रन्थ पुँजी सन् १८६७ मा प्रकाशित भयो । पुँजी को पहिलो प्रकाशन यता आज सन् २०१६ सम्ममा १४९ वर्षहरु बिति सकेका छन् । पहिलो समाजवादी क्रान्तिसम्पन्न भएका पनि ठीक १०० वर्ष पुरा भएका छन् । यी प्रसंगहरु कोट्याउँदै कतिपयले भन्ने गरेका छन् ‘‘माक्र्सवाद¬–लेनिनवाद पुरानो भयो । यसले पनि कहीँ आजको दुनियाँको विश्लेषण गर्न सक्छ ? माक्र्सवाद अब काम लाग्दैन ।’
पहिलो कुरा त माक्र्सवाद सत्य पत्ता लगाउने एउटा विधि हो । यसका सैद्धान्तिक–दार्शनिक उपकरणहरुको सहाराले सामाजिक विषयवस्तुहरुको विश्लेषण गरी सापेक्षिक सत्य पत्ता लगाउने हो । माक्र्सवाद सामाजिक विज्ञान हो । प्राकृतिक विज्ञानको क्षेत्रमा हुने विकासले माक्र्सवादी औजारहरुलाई अझै धारिला बनाउन मद्दत गर्ने छन् । माक्र्सवाद अपरिवर्तनीय ठानिने कुनै धर्मग्रन्थ वा मतवाद होइन, यो विज्ञान हो र यसमा निरन्तर प्रगति हुनसक्छ । जबसम्म संसारमा वर्ग रहन्छ, शोषक र शोषित रहने छन्, श्रम गरेर पनि खान नपाउने वा श्रमको उचित मूल्य नपाउने र काम नगरी खानेहरुका बीचमा समाज विभाजित रहनेछ, जबसम्म धनी देशहरुले गरीब देशहरुमाथि विभिन्न थिचोमिचो गरिरहने छन्, जबसम्म मात्र निजी फाइदाका लागि यस सुन्दर प्रकृतिको निर्मम दोहन हुने छ, तबसम्म माक्र्सवादको अपरिहार्यता कायमै रहने छ । जबसम्म धनी मानिसले गरीब मानिसलाई र धनी देशले गरीब देशलाई शोषण गर्ने प्रणाली कायम रहनेछ, तबसम्म निरन्तर विकास हुने माक्र्सवादले समाज परिवर्तनको बाटो देखाइरहने छ । जब समाजबाट धनीले गरीबलाई गर्ने शोषण समाप्त हुनेछ, वर्गभेद मेटिने छ, तब पनि माक्र्सवादले मानव समाजलाई दिशा निर्देश गरिरहने छ किनभने साम्यवादी समाज माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार नै निर्माण हुने छ । यो त आम कुरा भयो । समकालिन विज्ञानले माक्र्स वा लेनिनका पालाको तुलनामा कुनै दार्शनिक विकास गरेको छ त ? यस प्रश्नको उत्तरले माक्र्सवाद–लेनिनवादका बारेमा उठ्ने विज्ञानसम्मत आपत्तिहरुको जवाफ दिने छ ।
चाल्र्स डार्विनको जीव विकासको सिद्धान्तबारे गरिएको अनुसन्धानमूलक कृति सन् १८५९ मा प्रकाशित भएको थियो । समसामयिक विज्ञानबारे माक्र्स–एंगेल्स अत्यन्त जागरुक र जानकार थिए । उनका रचनाहरुमा समकालिन विज्ञानको गहन अध्ययनको छाप मात्रै भेट्टिँदैन, भविष्यको विज्ञानको विकासको दिशानिर्देश पनि भेटिन्छ ।
अलबर्ट आइन्सटाइनको महान खोज सापेक्षतावादको सामान्य सिद्धान्त सन् १९०५ मा प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि उनका जे¬–जति भौतिक विज्ञानका खोज–अनुसन्धानहरु प्रकाशित भएका छन् ती सबैबारे ब्लादिमिर इल्यिच लेनिनले गहिरो अध्ययन गरेका थिए । लेनिनको रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचनाले समकालिन विज्ञानका उपलब्धीहरुले कसरी माक्र्सवादलाई प्रमाणित गर्दछन् भन्ने कुरालाई सविस्तार चर्चा गरेको छ ।
सन् १९२५ मा वेर्नर हेइजनवर्गले पत्ता लगाएको क्वान्टम मेकानिक्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दार्शनिक विधिलाई प्रमाणित गरको छ । पदार्थ तरंग द्वैध रुपको सिद्धान्त ले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मूल प्रस्थापनालाई नै सही ठह¥याउँछ । सारांशमा भन्ने हो भने माक्र्सवादी विधि र ज्ञानलाई हालसम्मको वैज्ञानिक खोजले सही ठह¥याएको छ ।
अवश्य पनि अहिलेको प्राविधिक विकासलाई माक्र्स–एंगेल्सले देखेका थिएनन् । लेनिनले समेत अहिलेको स्तरको प्रविधिको विकास देखेका थिएनन् तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने विज्ञानका आधारभूत प्रस्थापना र प्रविधि एउटै कुरा होइनन् । माक्र्सको पालामा रेललाई वाष्प इन्जिनले तान्थ्यो, अहिले बिजुलीले तान्छ । बिजुली बत्तिको उज्यालो माक्र्सले देखेका थिए । टेलिफोन भद्दा आकारको भएपनि माक्र्सकै पालामा आइसकेको थियो, हातहातमा हुने मोबाइलको परिकल्पनालाई त्यसले उतिखेरै उजागर गरेको थियो । माक्र्सले रेडियो देखेका थिए, टेलिभिजन देखेका थिएनन तर उनकै पालामा स्थिर चित्र प्रसारण गर्न सकिने प्रविधि आइसकेको थियो । पहिलो चलचित्र प्रदर्शनी सन् १८९९मा भएको थियो जसलाई लेनिनले राम्रैसंग देखेका थिए । अहिले मूलतः दुरसञ्चार प्रविधिलाई हातहातमा पु¥याउने कामको विकास भएको छ तर भौतिक विज्ञानमा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा दर्शनको विकास भएको छैन । अर्कोतिर, कुनै पनि नयाँ भौतिक विज्ञानको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न माक्र्सवाद सक्षम छ ।
५.३. पार्टी निर्माणको राजनीतिक पक्ष
पार्टी वर्गीय हित साधनाको राजनीतिक हतियार हो । पुँजीवादी पार्टीले पुँजीपति वर्गकै सेवा गर्दछ भने कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको सेवा गरेकै हुनुपर्दछ । काम गरिखाने वर्गका विरुद्धमा कुन्¬–कुन वर्ग कसरी संगठित भएका छन् भन्ने कुरा कम्युनिष्ट पार्टीले पत्ता लगाएकै हुनुपर्दछ । समाजको अग्रगामी वा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र त्यसमा सहयोगी हुन सक्नेहरु एउटा कित्तामा उभिन्छन् भने क्रान्तिकारी रुपान्तरणको विरोध गर्नेहरु अर्को कित्तामा उभिन्छन् । वर्गीय समाजमा यो सदैव देखिने सत्य परिघटना हो । क्रान्तिमा शत्रू र मित्रको पहिचान भएकै हुनुपर्दछ । यसो गर्न नसक्ने कम्युनिष्ट पार्टीले विस्तारै आÇनो अस्तित्व गुमाउँछ ।
अचेल नेपाली राजनीतिमा र खासगरी नेकपा(एमाले) का केही मानिसहरुमा एउटा पतनशील विचार देखा पर्ने गरेको छ । उनीहरुका विचारमा वर्गशत्रूको पहिचान हुनै पर्दछ भन्ने छैन । यस्तो विचार धेरै नै हानिकारक छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा “फलानो पार्टी हाम्रो शत्रू राजनीतिक शक्ति हो” भन्न अप्ठेरो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । जनविरोधी वर्गलाई स्पष्टरुपमा चिन्हित गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन, त्यसको प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिलाई जनताले बुझ्ने भाषामा संकेत गरेकै हुनु पर्दछ । वर्तमान सन्दर्भमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद नेपाली जनताको प्रमुख शत्रू हो भन्ने कुरा नहिच्किचाइकन भन्नु पर्दछ । यसरी नेपाली जनताको प्रगतिको बाधक शक्तिको पहिचान भैसकेपछि सही पार्टी नीति बन्दछ र त्यसका आधारमा आम श्रमजीवी नेपाली जनतालाई संगठित गर्न सजिलो हुनेछ, संगठित भैसकेको जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सजिलो हुनेछ र पार्टीको लक्ष प्राप्त गर्न सकिने छ ।
५.४. पार्टी निर्माणको सांगठनिक पक्ष
पार्टी संगठन माथिदेखि तलसम्मको पिरामिड आकारको औपचारिक ढाँचा मात्रै होइन भनेर यस अघि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । पार्टी संगठनले यसको आधिकारिक विचारधारा र पार्टी कार्यक्रमलाई ब्यवहारमा उतार्न सक्ने हुनु पर्दछ । सांगठनिक ढाँचालाई सामान्यतया प्राविधिकरुपमा मात्रै बुझ्ने चलन छ । त्यस्तो होइन । कम्युनिष्ट पार्टीको सांगठनिक सञ्जालले सामाजिक क्रान्तिको नेतृत्वदायी वर्ग–श्रमजीवी वर्गका साथै यसमा सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न उपवर्ग र पेशाका जनतालाई समेट्न सक्नु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा केन्द्रले परमाणुको नाभिकण (न्युक्ल्यिस) को काम गर्नु पर्दछ जसले इलेक्ट्रोनहरुलाई सदैव आफूतिर आकर्षित गरोस् । यो पृथ्वीको केन्द्रभाग जस्तो हुनुपर्दछ जसले समग्र बाहिरी दृश्य संरचनाका साथै बायुमण्डललाई समेत आफूतिर आकर्षित गरोस् । यो हाम्रो सौर्यमण्डलको सूर्यजस्तो हुनुपर्दछ जसले आफ्नो परिवारका ग्रहहरुलाई आफूतिर आकर्षित गरोस्, छुट्टिएर जान नदेओस् ।
५.४.१. संगठनात्मक सिद्धान्त
आमरुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले लेनिनवादी संगठनात्मक विधि र सिद्धान्त लाई मान्दछन् । हालका दिनमा आएर ‘लेनिनवादी संगठनात्मक विधि–पद्धति पुरानो भयो’ वा ‘यो मातहतवादी भयो’ भन्ने आलोचना सुन्ने गरिएको छ । पार्टी केन्द्रले तानाशाही तरिकाले आदेश दिने र प्रादेशिक वा स्थानीय कमिटीहरुले माथिको आदेश फौजीढंगले मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको कुरा होइन । पार्टी सदस्यहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु पठाई महाधिवेशनको आयोजना गर्ने, महाधिवेशनले पार्टीको समग्र कार्यक्रम, नीति र पार्टी संगठन सञ्चालनको लागि विधान–नियम तय गर्नुका साथै आवधिक केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण गर्ने, अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको अवधिमा आइपर्ने तमाम विवादको अन्तिम निरुपण केन्द्रीय कमिटीले गर्ने, केन्द्रले गर्ने फैसलाहरु अरु कमिटीहरुले लागू गर्ने र लागू गर्न नसकिने विषयहरु भए केन्द्रलाई सुझाव पठाउने, कुनै पनि कमिटीमा सर्वसम्मतरुपमा प्रस्तावहरुबारे निर्णय हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा टुंग्याउने र अल्पमतको विचारलाई सुरक्षित राख्ने तथा समय¬–समयमा बहुमतले विगतमा गरेका निर्णयहरुको परीक्षणका साथै अल्पमतका विचारहरुबारे सघन विमर्श चलाउने र नयाँ निश्कर्ष निकाल्ने विधि नै लेनिनवादी संगठनात्मक विधि हो । यदि पार्टी केन्द्र कम्युनिष्ट आदर्शबाट विचलित हुन्छ, सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गप्रति गद्दारी गर्दछ वा गतिहीन हुनपुग्छ भने पार्टी सदस्यहरुले आफूहरुले नै नयाँ वा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न सक्छन् । यस्तो महाधिवेशनलाई कम्युनिष्ट राजनीतिक साहित्यमा ‘तलबाट बोलाइएको महाधिवेशन’ (रिक्विजिशन कंग्रेस) भनिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरु, मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनको यो भन्दा वैज्ञानिक विधि अरु निस्किएको छैन । सानो कमिटीको कुनै सदस्यले पनि केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्ने र सुझाव दिन सक्ने लोकतान्त्रिक विधि नै लेनिनवादी संगठनात्मक विधि हो । पार्टी केन्द्र नोकरशाह या तानाशाह हुने र स्थानीय कमिटीहरु अराजक हुने दुबै कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक विधिभन्दा बाहिरका कुरा हुन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र(जनवाद)को पर्याप्तताका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन हुनै पर्दछ । यसैलाई जनवादी केन्द्रीयता भनिन्छ । वर्तमान विश्वमा ब्यवहारतः गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि यही विधि प्रयोग गर्दछन् । संगठन सञ्चालनको योभन्दा अरु कुनै बढी वैज्ञानिक, यसर्थ लोकतान्त्रिक विधि पत्ता लागेछ भने त्यसलाई कम्युनिष्ट पार्टीले सहर्ष स्विकार्नु र संस्थापित गर्नु पर्दछ ।
प्रायजसो कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रहरुले आफूलाई पृथ्वीको केन्द्र वा परमाणुको नाभीकणको रुपमा होइन, पिरामिड अकारको ढाँचाको सबैभन्दा माथिल्लो भाग ठान्दछन् र तलतिर मनपरी आदेश लाद्न थाल्छन् वा कार्यकर्तापक्तिसंगको सल्लाह–परामर्श बिना, नेतृत्वको मनमौजी चाहना बमोजिम निर्णहरु लागू गर्न थाल्छन् । ब्यवहारमा देखिएअनुसार कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा सत्तामा जानुभन्दा पहिले कमै देखिन्छ भने सत्तामा पुगिसकेपछि बढी मात्रामा देखिन थाल्छ । यस्तो त्रुटी गर्नेहरुका मनपरीलाई उदाहरण दिएर लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त ठीक छैन भन्नु ठूलो गल्ति हुने छ ।
यहाँनिर स्व. जननेता मदनकुमार भण्डारीको भनाइ उदृत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ–
“कम्युनिष्ट पार्टी संचालित हुने विज्ञानसम्मत संगठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ, त्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हो । यसलाई पालन नगर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुन्छन् र त्यस्तो भएनन् भने पनि तिनीहरूले क्रान्तिको अगुवाई गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशमा २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भयो र २०२२ सालमा विभाजित एवं छिन्नभिन्न भयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा भएको विभाजनमा राजनीतिक, सैद्धान्तिक र अरु कारणहरूको मात्रा धेरथोर जति भए पनि गैर सर्वहारा प्रवृति र लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको गंभीररुपमा उल्लंघन भएको तथ्य कसैले लुकाउन सक्दैन । यो उल्लंघन फुटेर जानेहरुले मात्र गरेका हुन् भन्न सकिन्न । फुट्नु मात्र उल्लंघन हो भन्न सकिन्न । संगठन निर्माण गर्ने र त्यसलाई चलाउने, वस्तु वा घटनालाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने, विचारहरूलाई खेल्न दिने, फरक मतलाई संचालन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने तथा विचारधारात्मक संघर्ष संचालन गर्ने जस्ता अनेकौं सवालमा संगठनात्मक सिद्धान्तको उल्लंघन भएको हुनसक्छ ।
“विभाजनको निम्ति सिद्धान्त र राजनीतिको मतभेद नै प्रमुख हो भने फुटेर पुर्नगठित भएका समूहहरुमा फेरी उही फूट र विभाजन देखिने थिएन, विचारधारात्मक संघर्ष गहिरिएर जाने थियो र अहिलेसम्म धेरै कुरामा सही र गलतको फैसला भैसक्ने थियो । तर त्यसो भएन । यसको मतलब नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अरु कुरा बाहेक लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बुझ्ने, समाउने र इमान्दारीपूर्वक पालन गर्ने काम भएन, बरु त्यसको घोर उल्लंघन भयो ।”
लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताका दुई पक्ष हुन्छन्– सार पक्ष र रुप पक्ष । यसको सार पक्ष भनेको विचारधाराको पक्ष हो भने रुप पक्ष भनेको सांगठनिक स्वरुप हो ।
फरकमत राख्नेहरुलाई पार्टीमा सम्मानजनक ब्यवहार गर्ने, निजलाई पार्टीमा रहेको पदीय हैसियत र योग्यता बमोजिम कार्यक्षेत्र दिने, कार्यविभाजनमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्ने, अध्ययन, प्रशिक्षण र समीक्षा–आलोचनालाई निरन्तर प्रोत्साहित गर्नेगरी संगठन सञ्चालन गर्नु, कार्यकर्ताको निर्माण र विकास गर्नु लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको पालना गर्नु हो ।
नेकपा (एमाले)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी निर्माणका बारेमा अगाडि सारेको दृष्टिकोणलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुने छ–“पार्टी निर्माणको मुख्य आधार यसको वैचारिक पक्ष हो । हाम्रो सन्दर्भमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति नै पार्टी निर्माणको मुख्य वैचारिक आधार हो ।”
माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुबारे गहिरो अध्ययन गरेर र नेपाली क्रान्तिको आजको विशिष्ट अवस्थाबारे वैचारिक–सैद्धान्तिक स्पष्टता हासिल गरेर मात्रै पार्टी निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ । वैचारिक काम, अध्ययन र प्रशिक्षणमा आइरहेको कमी र वैचारिक स्तरमा आएको ह«ासले पार्टी निर्माणमा समस्या खडा गरिरहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको वैचारिक कामलाई अझ जोड दिन जरुरी छ । ”
वैचारिक स्पष्टतासंगै संगठनात्मक चुस्तता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरुपता पार्टी निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर पछिल्लो समय संगठनात्मक आकार भद्दा हुने, संगठनमा आवद्धता, मापदण्ड र प्रक्रियाको कडाइका साथ पालना नहुने , संगठनहरु कार्यार्थभन्दा पनि बोधार्थ या मानार्थजस्ता हुने र गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा समस्याहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । कुनै बेला सीमित पार्टी सदस्य हुँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याउन सक्ने पार्टी अहिले बढेको आकारको तुलनामा कतिपय राजनीतिक प्रश्नमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न पछाडि पर्दै गएको अवस्था छ । यसको अन्त्यका लागि संगठनात्मक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा नीतिहरु बनाइरहँदा अब हामीले नेता–कार्यकर्ता र सिंगो पार्टी संगठनको आचरणको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनु जरुरी छ । आदर्श र आचरणको बीचमा विरोधाभास यतिबेला पार्टीले सामना गर्नु परिरहेको गम्भिर चुनौतिका रुपमा उपस्थित छ । यसले पार्टीको प्रतिष्ठालाई कमजोर गर्न र पार्टीप्रतिको आकर्षणलाई कम गर्न भूमिका खेलिरहेको छ ।
“हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दै आएका छौं । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । तर अभ्यासका क्रममा यसले केही नकारात्मक परिणामहरु पनि जन्माएको छ । खासगरी, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा हुने प्यानलगत उम्मेदवारी, त्यसले सिर्जना गर्ने भावनात्मक र संगठनात्मक विभाजनको मनस्थिति, निर्वाचन जित्नका लागि चालिने सबै खाले उचित÷अनुचित कदमहरु नयाँ चुनौतिका रुपमा खडा भएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माणको विषयमा छलफल गरिरहेको बेला यी अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।”
५.५.पार्टी निर्माणको सांस्कृतिक पक्ष
मानिसले नैसंस्कृति र सभ्यताको विकास गरेको हो । संस्कृति भनेको मानिसको आन्तरिक चेतनाको प्रतिविम्ब हो भने सभ्यता भनेको बाह्य रहनसहन, खानपिन, आवास वा घर–बार, पहिरन, उत्पादनका साधनहरु आदिको समुच्यय स्वरुप हो । पार्टी निर्माणमा सम्बन्धित समाजको सांस्कृतिक पक्षले गहिरो प्रभाव पार्दछ । हामी यसै समाजमा बस्छौं र यही समाजको अग्रगामी परिवर्तनका लागि पार्टी निर्माण गरिरहेका छौं ।
पार्टी निर्माण गरिरहँदा कस्ताकस्ता खालका सांस्कृतिक परिवेशबाट आएका मानिसहरुलाई समेटिएको छ र तिनीहरुलाई रुपान्तरित गर्ने कस्ताकस्ता उपायहरु अपनाइएको छ भन्ने विषयमा गंभीर ध्यान जानु पर्दछ । पार्टी निर्माण भनेको संगठनरुपी कारखानामा सबै खालका मानिसहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा ल्याएर त्यसलाई प्रसोधन गरी परिष्कृत कार्यकर्ता पंक्ति उत्पादन गर्ने हो । कार्यकर्ता पंक्तिलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै देशको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।
यस समाजमा अग्रगामी र पश्चगामी दुबै सांस्कृतिक तत्वहरु छन् । समाजलाई जुनजुन कुराहरुले अग्रगमनतर्फ लैजान्छन् तिनलाई खोजीखोजी अवलम्बन गर्नु पर्दछ भने जुनजुन कुराहरुले पश्चगमनतर्फ लैजान्छन् तिनलाई खारेज गर्ने वा हटाउने काम गर्नु पर्दछ । हामीहरुले नेपाली समाजमा समाजवादको निर्माणका लागि कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको कुरा गरिरहेका छौं । समाजवादी संस्कृति के हो भन्ने बारेमा यहाँनिर निम्नलिखित उद्धरण राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ–
“निम्नलिखित कुराहरु समाजवादी संस्कृतिका विशिष्ट गुणहरु हुन्– जनतामा आधारित हुनु, कम्युनिष्ट विचारधारा, श्रमिक वर्गीय पक्षधरता, वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण, समाजवादी मानवता, सामूहिकता, समाजवादी देशभक्ति र अन्तर्राष्ट्रियतावाद । समाजवादी संस्कृतिको निर्माण र विकासमा कम्युनिष्ट पार्टीले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीले नै समाजवादी राज्यको सम्पूर्ण सांस्कृतिक तथा शैक्षिक गतिविधिहरुलाई प्रभावित गर्नु पर्दछ । समाजवादी संस्कृति रुपमा राष्ट्रिय, सारमा समाजवादी तथा भावनात्मक रुपमा अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुन्छ ।”
५.६. पर्टीनिर्माणको आर्थिक पक्ष
माक्र्सवादले अर्थतन्त्र वा आर्थिक ब्यवस्थालाई समाजको आधार मान्दछ । निश्चित प्रकारको आर्थिक आधारमा समाजको माथिल्लो ढाँचा अडिएको हुन्छ । यसर्थ समाजको निर्माणमा आर्थिक आधार निर्णायक हुन्छ । यही कुरा पार्टी निर्माणमा पनि लागू हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ, पार्टीका लागि आवश्यक खर्चको जोहो कसरी गर्ने गरिएको छ, हिसाब–किताब कत्तिको ब्यवस्थित र पारदर्शी राखिन्छ भन्ने कुराले कस्तो पार्टी बन्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ ।
५.६.१. पार्टी निर्माणमा आर्थिक स्रोत परिचालनले पार्ने प्रभाव
पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । पार्टीले त्यो स्रोत कसरी प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराले पार्टी निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । यदि कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालनमा टिकेको छ भने उसका नीतिहरु वस्तुगत यथार्थको नजिक हुन्छन्, उसले श्रमजीवी वर्गका शत्रू र मित्रको सहज पहिचान र किटान गर्न सक्छ । यस्तो पार्टीले देश र जनताका बारेमा सही निर्णय लिन सक्छ । यस्तो पार्टी संघर्षशील भावनाले युक्त र स्वाभिमानी हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक स्रोतका शीर्षकहरु भनेको पार्टीले आफ्नै उत्पादनबाट गर्ने आर्जन, कार्यकर्ताहरुले दिने लेवी र समर्थक जनपंक्तिबाट उठाइने स्वेच्छिक चन्दा नै हुन् । यी मध्ये लेवी र जनस्तरमा उठाइने चन्दाका स्रोतहरु बढी प्रयोग गर्ने गरिएका छन् । पार्टीले आफ्नै उत्पादनको विक्री वितरणबाट या ब्यवसाय सञ्चालनबाट आय आर्जन गर्ने अवस्था नेपालमा भेटिन्न । परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीकामको तीब्रता र ब्यस्तताका कारणले खर्चको भार बढ्दै जान थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरुले दिने लेवी र खासखास बेलामा जनस्तरमा उठाइने चन्दाले मात्र पार्टीको खर्च धान्न सक्दैन ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो खर्च धान्नका लागि ठूला पुँजीपति घरानाहरुसंग चन्दा लिने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । ठूलो पुँजीपतिले धेरै आर्थिक चन्दा त्यसै दिँदैन, घोािषत वा अघोषितरुपमा शर्तबन्दी गरेको हुन्छ । यसो गर्दा पार्टीमा पुँजीवादी दृष्टिकोण प्रभावी बन्दै जाने खतरा रहन्छ, जुन कुरा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भोगिरहेको स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ । सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरेको पार्टीले धनी वर्गसंग चन्दा असुली गर्नुलाई स्वाभाविक र सामान्य मान्ने गर्दछन् । जबरजस्ती वा तोकुवाको भरमा ठूलो मात्राको धनराशी लिइएता पनि त्यहाँ शर्तबन्दी हुँदैन भन्ने तर्क दिइने गरिन्छ । सूक्ष्मढंगले विश्लेषण गर्दा परिणाम उल्टो देखिने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल नभएको धनी मानिससंग ठूलो मात्राको चन्दा रकम लिने बानी परेपछि पार्टीमा फजुल खर्च बढ्ने मात्र होइन, परनिर्भरताको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ । अनि क्रमशः आधारभूत वर्गका जनताबाट टाढिने क्रम बढ्न थाल्छ । हुँदा हुँदा चन्दा दिएकै आधारमा वर्गविरोधीको संरक्षण र श्रमजीवी वर्गका कार्यकर्ताको तिरस्कार हुन थाल्छ । आफ्नो पार्टीको सदस्यता नलिएको श्रमजीवी वर्गकै मानिस शत्रूजस्तो लाग्ने र चन्दा दिएको प्रतिक्रियावादी मित्रजस्तो लाग्ने परिघटना हाम्रै देशको माओवादी आन्दोलनमा यत्रतत्र सर्वत्र देखिएको थियो । यही प्रवृति अहिले देशका प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा प्रभावी बन्न थालेको छ । यस्तो प्रवृतिलाई नहटाएसम्म कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण अधोगतितिर जाने छ ।
सत्तामा गएको बेला वा संसदको प्रतिपक्षीय हैसियत प्रयोग गरेर सरकारी साधन–श्रोतलाई पार्टी काममा प्रयोग गर्नुलाई ज्यादै सहजताका साथ लिन थालिएको छ । सरकारी साधन–स्रोतको दुरुपयोग गरी पार्टी काममा परिचालित गर्नु झन् ठूलो आर्थिक अपराध हो । त्यसरी प्रयोग गरिने स्रोत पारदर्शी हुँदैन, कानुनी ढंगले सरकारी पैसा र साधन–श्रोत पार्टी काममा खर्च गर्न पाइन्न । यस्तो कामले पार्टीभित्रै दलाल पुँजीवादी प्रवृति विकसित हुन्छ र चन्दामाथि पनि भ्रष्टाचार हुने खतरा रहन्छ ।
नेकपाको स्थापना गरेपछि कलकत्तामा कमरेड पुष्पलाल र भारतीय कम्युनिष्ट नेता नृपेन चक्रवर्तीका बीचमा भएको मार्मिक वार्तालापलाई यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । पाँचजना मिलेर भर्खर पार्टी स्थापना गरेको बेला पहिलो पर्चा निकाल्नका लागि पनि कमरेड पुष्पलालसंग पैसा थिएन । वहाँले केही आर्थिक सहयोगजुटाइदिनका लागि नृपेन चक्रवर्तीसंग अनुरोध गर्नुभएछ । त्यसको जवाफमा कमरेड नृपेन चक्रवर्तीले भन्नुभएछ– “हेर पुष्पलाल, हामी तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छौं, यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तर नेपाली जनताले तिम्रो पार्टी बचाउन सक्दैनन् भने कसरी आन्दोलन अगाडि बढाउन सकौला त ?” त्यसपछि पुष्पलालले पत्रिका बेचेर आर्थिक स्रोत जुटाउनु भएछ र पहिलो पर्चा छाप्नुभएछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले आम जनताबाट सानो–सानो मात्राको भए पनि आर्थिक सहयोग निरन्तर उठाइरहनु पर्दछ । यसले पार्टीको आर्थिक स्रोत बलियो त हुन्छ नै, पार्टीलाई जनताको पंक्तिसँग निरन्तररुपमा जोडिरहन्छ । जनताको पंक्तिले पनि आफूले सहयोग गरेको पार्टीमाथि नै आशा र भरोसा राख्दछन् । अहिले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आम जनताबाट सहयोग लिन छाडेका छन् । यसले उनीहरुलाई जनपंक्तिबाट टाढा पु¥याउने खतरा बढेको छ । पार्टी जनतामा जाने भनेको आÇना राजनीतिक विचार र कार्यक्रम लिएर मात्रै जाने होइन । जनतालाई सहयोग गर्ने र जनतासंग सहयोग लिने दोहोरो प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु नै जनतामा जानु हो ।
५.६.२.स्रोत परिचालनमा पारदर्शिताको पक्ष
कम्युनिष्ट पार्टीको आयको स्रोत र खर्च दुबै पारदर्शी र हिसाब¬–किताब ब्यवस्थित हुनु पर्दछ । पार्टीमा कहाँबाट कसरी सहयोग आइरहेको छ र कहाँ खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा यथार्थरुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकसित गरियो भने त्यसले पार्टीका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् । हिसाब–किताब पारदर्शी गरिने भएपछि लिन नहुने ठाउँबाट सहयोग लिईंदैन र गर्न नहुने ठाउँमा खर्च गरिन्न । आर्थिक पारदर्शिताको पक्षले कार्यकर्ताहरुलाई स्वतः अनुसासित बनाउँदै लैजान्छ ।
५.७. पार्टी निर्माणमा मनोवैज्ञानिक पक्ष
मानिस यन्त्र होइन, उसको मन (दिमागको भावनात्मक पक्ष) हुन्छ । पार्टीमा कार्यकर्ताहरु भिन्न–भिन्न परिवार र सामाजिक परिवेशबाट आएका हुन्छन् । तिनीहरुको छुट्टाछुट्टै मनोविज्ञान हुन्छ । एउटै आमाका सन्तानहरुमा पनि एकै प्रकारको मनोविज्ञान पाइन्न । हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै मनोवनावट हुन्छ, आ–आफ्नै स्वत्व र अहं हुन्छ, आ–आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ । कुनै कार्यकर्तालाई एउटा तरिकाले सम्झाउन र काममा लगाउन सकिन्छ भने कुनै कार्यकर्तालाई अर्को तरिकाले कुरा बुझाउन र काममा लगाउन सकिन्छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा सामूहिकता र वैयक्तिकता दुबै हुन्छ । मनोविज्ञानले वैयक्तिकतालाई ध्यान दिन्छ । भौगोलिक र जातीय हिसाबले सामूहिक मनोविज्ञान पनि बनेको हुन्छ । यसैले पार्टी निर्माण गर्दा कार्यकर्ताहरुको निजी र सामुहिक दुबै मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
हरेक व्यक्ति चाहन्छ–उसको अस्तित्वलाई सबैले मानिदिउन्, सम्मान गरुन्, उसको कुरा गंभिरतापूर्वक सुनिदिउन् । हरेक कार्यकर्तालाई ‘यस कमिटीमा मेरो आफ्नै मौलिक स्थान छ, यस कमिटीलाई म आवश्यक छु, कमिटीले मेरो आवश्यकता बोध गरेरै मलाई संगठित गरेको हो ’ भन्ने अनुभूति भयो भने संगठनको एकता बलियो हुन्छ । कमिटीमा हरेक कार्यकर्ताको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनु भनेको व्यक्तिवादी प्रवृतिलाई मौलाउन दिनु पर्दछ भनेको होइन । हरेक व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई ध्यान दिएमा उसमा भएका राम्रा पक्षलाई अगाडि बढाउन र कमी–कमजोरीलाई सच्याउनका लागि सहयोग गर्न सकिन्छ । व्यक्तिमा भएका कमी–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नु वा कार्यकर्तामा देखिने गलत आचरणबारे थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो अवश्य पनि गर्नु हुँदैन । गलत कुरालाई अगाडि बढ्नै दिनु हुँदैन तर त्यसलाई सच्याउन पनि उपयुक्त विधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ । कसैका कमजोरी छन् भने उसलाई सही वैचारिक र ब्यावहारिक शिक्षाद्वारा भित्रैदेखि महसुस गराउनु पर्दछ ।
परस्परको लोकतान्त्रिक ब्यवहारबाट नै पार्टी पंक्तिमा साझा मनोविज्ञानको विकास गर्दै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । विभिन्न तहका पार्टी कमिटीमा संगठित सबैलाई हरेक निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सर्वस्विकृत विधि–पद्धतिबाट भएको छ, हरेक कुरा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाका आधारमा तय गरिएका र कार्यान्वयनमा लगिएका छन् भन्ने अनुभूति भयो भने साझा मनोविज्ञान बन्छ । पार्टीभित्रका सबै कुरा निश्चित विधि, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट भएका छन् भन्ने अनुभूति सबै कार्यकर्तापंक्तिलाई भयो भने सबै सन्तुष्ट हुन्छन् । खासगरी पार्टीले पारिश्रमिक पाउने र सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढ्ने ठानिएका ठाउँहरु– मन्त्री, सांसद, स्थानीय निकायका महत्वपूर्ण पदहरु, र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरुमा– कसैलाई पठाउँदा निश्चित मापदण्ड बनाएर संस्थागत निर्णयका आधारमा गरियो भने सबैको चित्त बुझ्छ । यसो भयो भने पार्टीमा गुटबन्दी हुन पाउँदैन ।
५.८. पार्टी निर्माणमा अनुशासनको पक्ष
कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंसेवी संगठन हो । वर्गीय मुक्तिको बाटो हुँदै समग्र मानवताको मुक्तिका लागि मानिसहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा आएका हुन्छन् । कसैको इछ्या विपरित पार्टीमा संगठित गर्न सकिन्न, करकापले संगठित गरिएको कार्यकर्ता पार्टीमा टिक्दा पनि टिक्दैन । स्वयंसेवी संगठन हो भन्दैमा संगठनका विधि–नियमहरु मिच्ने कुरालाई छुट दिनु हुँदैन । कम्युनिष्ट आचरण नमान्ने, वैचारिक, सांगठनिक, आर्थिक, चारित्रिकइत्यादि अनुशासन उलंघन गर्ने मानिस जतिसुकै ठूलो नेता वा आधारभूत तहको कार्यकर्ता जो सुकै भए पनि उसलाई अनुसासनको कार्वाही गर्नै पर्दछ । गल्ति गर्नेलाई अनुशासनको कार्वाही नगर्दा संगठनमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ, स्वच्छन्दतावाद बढ्छ र परिणामस्वरुप संगठन नै तंगभंग हुन पुग्छ ।
पार्टी अनुशासनको पालनाको प्रत्याभूति केन्द्रीय नेतृत्वदेखि शुरु हुनु पर्दछ । माथिल्लो कमिटीका नेताहरु अनुशासित भएमा मात्रै तल्ला कमिटीहरुमा अनुशासन लागू गर्न÷गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहका कमिटीको कुनै सदस्यले गल्ति गर्दा त्यसले स्थानीय तहमा मात्रै प्रभाव पार्दछ भने केन्द्रीय तहको नेताले गल्ति गर्दा त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्न सक्छ । यसैले अनुसासनको पालनामा पहिले केन्द्रीय तहमै कडाई गरिनु पर्दछ । अहिले यसो हुन सकिरहेको छैन । हालका दिनमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा माथिल्लो तहमै अनुशासन उलंघन गर्ने र गुटको आवरणमा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने मात्रै होइन, गलत कुरालाई महिमामण्डित गर्ने धेरै नराम्रो परिपाटी विकसित भएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा अनुशासनबारे धेरै साँघुरो बुझाइ रहेको देखिन्छ । महिला–पुरुषको बीचमा समाजले स्विकृत गरेभन्दा फरकढंगले हुने शारिरिक सम्बन्धलाई सबैभन्दा ठूलो अनुशासन उलंघनको घटना मान्ने, त्यसपछि बहुविवाहलाई अनुशासन उलंघन मान्ने र तेश्रो कोटीमा प्रामाणिक आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मान्ने एकखालको सामाजिक मनोविज्ञान नै छ जसको छाप सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा परेको छ । निश्चय नै यी कुराहरु दण्डनीय हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर पार्टी अनुशासनबारेको यो ज्यादै साँघुरो बुझाई हो । दुःखको कुरा, हालका दिनमा यही साँघुरो कुरामा पनि दण्ड हुन छोडेको छ र पार्टीपंक्तिमा आमरुपमा निरासा छाउन थालेको छ ।
पार्टीका नीतिहरुको उलंघन वा लापरवाहीपूर्ण काम–कारवाहीले आन्दोलनमा पु¥याउने क्षतिको मात्रा अत्यन्त धेरै हुन्छ तर यस्ता विषयमा पार्टीमा कसैलाई कारवाही हुन छोडेको छ । राज्यको निर्णायक तहमा कुनै गलत व्यक्तिको नियुक्तिले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धरापमा पार्न सक्छ तर यस्तो विषयमा कुनै दण्ड वा कारवाही नहुने परंपरा नै बसेको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गयो भने कम्युनिष्ट पार्टी समाप्तिको दिशातिर जान्छ । यसबारेमा सजग हुनलाई ढिलो भैसकेको छ ।
५.९. पार्टी निर्माणमा नेतृत्वको पक्ष
कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार विचार–सिद्धान्त हो भन्ने बारेमा माथिल्ला अनुच्छेदहरुमा उल्लेख गरिसकिएको छ । विचारलाई नेतृत्व गर्ने मानिस नै नेता हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा वैचारिक बहस हुन्छ, हुनुपर्दछ । सामान्यतयाः वैचारिक बहसलाई महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट टुंगोमा पु¥याउने काम गरिन्छ । महाधिवेशनमा जसको विचार पारित हुन्छ, उसैलाई पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको जिम्मा दिनु पर्दछ । यसो भयो भने सम्बन्धित नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण पनि हुन्छ, पार्टी हाँक्न नसक्ने नेतृत्व पछाडि हट्न बाध्य हुन्छ भने राम्रोसंग पार्टी हाँक्ने नेतृत्वको विकास पनि हुन्छ । पार्टी निर्माण भनेको नेतृत्व निर्माण पनि हो । नेतृत्व निर्माण भनेको राष्ट्र निर्माणको अवयव पनि हो । यसैले कम्युनिष्ट पार्टीमा जसको विचार उसको नेतृत्व हुनै पर्दछ । दुःखको कुरा, बेलाबेलामा यही कुरा खण्डित हुने गरेको छ । यसैकारणले पार्टी निर्माण कमजोर भएको छ ।
५.१०. पार्टी निर्माणमा कार्यकर्ता नीतिको पक्ष
कार्यकर्ता कसरी उत्पादन गर्ने र भएका कार्यकर्ताहरुलाई कसरी निरन्तर रुपमा पार्टीमा सक्रिय बनाउने भन्ने कुरालाई कार्यकर्ता नीति भनिन्छ । कार्यकर्ता कसरी बाँच्छ, उसको परिवारको आजिविका कसरी चल्छ र उसले निस्वार्थ भावले काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पार्टीमा स्पष्ट नीति हुनु पर्दछ । नेतृत्वले कार्यकर्तालाई सकिन्जेल घोडा बनाएर हिँडाउने र हिँड्न नसकेर थला परेपछि अर्को नयाँ घोडा खोज्ने गर्नु हुँदैन । कार्यकर्ताका जीवनका समस्या हल गर्न नेतृत्वले नै सघाउनु पर्दछ ।
कमरेड पुष्पलालले पार्टी कामलाई हरेक कार्यकर्ताले आÇनो जीवन पद्धतिसंग जोड्नुपर्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो । वहाँले निजी सुविधा त्यागेर पार्टी काममा लाग्न प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो तर भावनामा बगेर घर–ब्यवहार लथालिंग पारेर परिवारको बिल्लिबाठ बनाउन नहुने कुरामा जोड दिनुहुन्थ्यो । पूर्णकालिन बन्न चाहने कार्यकर्ताहरुले परिवारलाई दुःखले भएपनि बाँच्नसक्ने बनाएर मात्र पार्टी काममा लाग्नु पर्ने कुरामा कमरेड पुष्पलालले सदैव जोड दिनुहुन्थ्यो ।
लामो समयसम्मको अन्यौललाई चिर्दै नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनले कार्यकर्ता नीतिको बारेमा सुस्पष्ट नीति अगाडि सारेको छ । हरेक कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्ने र आत्मनिर्भर स्वाभिमानी कार्यकर्ताको पार्टीको रुपमा नेकपा (एमाले)लाई अगाडि बढाउने नीति पारित गरिएको छ । एनेकपा(माओवादी)को विगत सातौं महाधिवेशनले पनि यही खालको नीति पारित गरेको छ भने नेकपा(मसाल), नेकपा(संयुक्त), नेमकिपा लगायतका देशका अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि यसैखाले कार्यकर्ता नीति बनाएका छन् । नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकैखाले वा मिल्दोजुल्दो कार्यकर्ता नीति हुनु सुखद पक्ष हो । यसले देशमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दीगो बनाउन मद्दत गर्ने छ ।
कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्नु भनेको आफ्नै कमाइमा बाँचेर पार्टी काम गर्ने कार्यकर्ता तयार गर्नु हो । भूमिगत अवस्थामा कार्यकर्ता जहाँ जान्थे, त्यहीँ रुखो–सुखो जे पाइन्छ खान्थे, जनताले दिएको कपडा लगाउँथे । अहिलेको पूर्णकालिन कार्यकर्ताले सधैं अरुको घरमा खाना खान र बस्न संभव छैन । विगतमा घर–परिवार छोडेर हिँडेको मानिससंग परिवारले पनि खासै सहयोगको आशा गर्दैनथ्यो । अहिले परिवारले सहयोगको आशा गर्नु स्वाभाविक छ । यसैले कार्यकर्ता आर्थिक उत्पादनसंग जोडिनै पर्दछ, आफ्नो कमाईमा बाँच्नसक्ने हुनै पर्दछ ।
कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्नु भनेको पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरुले पार्टीकाम छोडेर कमाइ मात्रै गर्ने धन्दामा लाग्नु पर्दछ भनेको होइन । पार्टीलाई पूर्णकालिन कार्यकर्ता चाहिन्छ । पूर्णकालिन कार्यकर्ताले नै पार्टी कामको समग्र नेतृत्व र ब्यवस्थापन गर्न सक्छन्, भ्याउँछन् । वर्तमान सन्दर्भमा पूर्णकालिन कार्यकर्ताको परिभाषा पनि परिमार्जित गर्नु पर्दछ । दैनिक कम्तिमा आठ घण्टा पार्टी काममा लगाउने वा महिनामा कम्तिमा २०० घण्टाको समय पार्टी काममा ब्यस्त हुने कार्यकर्तालाई अहिलेको सन्दर्भमा पूर्णकालिन भन्नु पर्दछ ।
कसैलाई बचेको समयमा कुनै आयआर्जनको काम गर्न सक्ने अनुकूलता र दक्षतासमेत हुन्छ भने कसैलाई त्यो अनुकूलता नहुन सक्छ तथा अंशकालिनरुपमा आय आर्जन गर्न सक्ने दक्षताको अभाव पनि हुनसक्छ । हरेक कार्यकर्ता उत्पादनसंग जोडिने भनेको आफूले ब्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिएर परिवारका अरु सदस्यहरुलाई घर चलाउन सक्ने गरी आय आर्जन गर्न सक्ने बनाउनु पनि हो ।
कार्यकर्तालाई उत्पादनसंग जोड्ने नीतिका तीनवटा पक्ष छन्– (१) हरेक कार्यकर्ताले आफू र आफ्नो परिवार बाँच्न सक्नेगरी कुनै न कुनै वैधानिक आयआर्जनको कामसंग जोडिनु पर्दछ, (२) हरेक कार्यकर्ताले समाजमा विभिन्न उत्पादनका गतिविधि अगाडि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । हरेक कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संभव हुने उत्पादनको गतिविधि अगाडि बढाउन पहलकदमी लिएमा मात्रै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि अगाडि बढ्छ, र (३) पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनयापनको स्रोत खुला र पारदर्शी हुनु पर्दछ । कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताको आयको स्रोत के हो भन्ने कुरा आम जनताले थाहा पाउने र विश्वास गर्नसक्ने हुनुपर्दछ ।
६.निष्कर्ष : पार्टी निर्माणबाट राष्ट्र निर्माण
सही कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दछ तथा राष्ट्रका विरोधीहरुलाई परास्त गर्दछ । सही कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको जनजीविका सुनिश्चित गर्दै श्रमिक वर्गलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउँछ । कम्युनिष्ट पार्टीका सही नीतिहरुले छरिएर रहेका देशहरुलाई एकीकृत गर्नेसम्मको हैसियत राख्दछन् भन्ने दृष्टान्त पूर्व सोवियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीले देखाएर गएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सही नीतिले देशको गुमेको भूभाग वा औपनिवेशिक दासतामा रहेको भूभाग पनि फिर्ता लिन सक्छ भन्ने उदाहरण चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले देखाएको छ ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकीकृतरुपमा साझा अडान लिएकै कारणले वर्तमान संविधान जारी गर्न संभव भएको हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । नेकपा(एमाले)का कतिपय नीतिलाई देशका अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि पछ्याएका छन् । यो नेकपा (एमाले)को पार्टी निर्माणबाट संभव भएको हो ।
अहिले फेरि पार्टी निर्माणका विविध पक्षमा गंभीर ध्यान दिनु पर्ने भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको मूल पक्ष विचार–सिद्धान्त हो भने नेता–कार्यकर्ताको आचरण, कार्यशैली र कार्यपद्धति पनि पार्टी निर्माणका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली र आम आचरण र गैर कम्युनिष्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली भन्दा पृथक हुनै पर्दछ । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको आचरण र जीवनशैली आम जनताले थाहा पाउने गरी अन्य पार्टीको भन्दा भिन्न हुनै पर्दछ । सही कार्यकर्ताले असल पार्टी निर्माण गर्दछन्, सही कम्युनिष्ट पार्टीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछ ।
मदन भण्डारी अध्यक्ष केन्द्रले आयोजना गरेका दुई दिने कार्यशालामा नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य डा. पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगा...
काठमाडौं । पुनर्निर्माण भइरहेको काठमाडौं त्रिपुरेश...